अन्तमा माइक्रोसफ्ट आउटलुक Android मा आउँछ Androidsis
यदि तपाईं यी बर्षहरूमा एन्ड्रोइडमा तपाईंको हटमेल वा आउटलुक ईमेल खाता प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले सम्भवतः समाप्त गर्नुभयो केहि अनुप्रयोगहरूसँग थकित छ जसको एक राम्रो नराम्रो डिजाइन थियो र त्यो कहिलेकाँही उनीहरूले राम्रोसँग पनि काम गरेनन्। एन्ड्रोइड मार्फत एक सेवा थोरै दु: खी थियो र त्यो अन्तमा, वर्षौं कुर्नुभए पछि, Android को लागि आधिकारिक आउटलुक अनुप्रयोग आज आइपुगेको छ।
दुबै ट्याब्लेट र एन्ड्रोइड फोनहरूको लागि सिर्जना गरिएको, माइक्रोसफ्ट वाचा आउटलुकले प्रयोगकर्तालाई उनीहरूको मोबाइल उपकरणबाट उनीहरूको मनपर्ने ईमेलको साथ सबै कामहरू गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईं आफ्नो सबै ईमेलहरू प्रबन्ध गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको ईनबक्स प्रबन्ध गर्नुहोस् जस्तो तपाईं वर्षौं खोज्दै हुनुहुन्छ।
1 अन्तमा एन्ड्रोइडमा
2 अनुकूलित र राम्रो डिजाइन
यदि माइक्रोसफ्ट बिभिन्न अनुप्रयोगहरू सुरू गरिरहेको छ हालसालै Android मा, आउटलुक अनुप्रयोग हो जुन धेरै प्रयोगकर्ताहरूले यसको आगमनको लागि प्रतिक्षा गरिरहेका थिए। यद्यपि Gmail अहिले नै सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको ईमेल हो, त्यहाँ अझै धेरै प्रयोगकर्ताहरू छन् जसले उनीहरूको हटमेल ईमेल खाताहरू छन्, त्यसैले यो अनुप्रयोग सबैलाई स्वागत छ।
यस ढिलाइले अन्तमा यस ईमेल सेवा प्रयोग गर्ने धेरै प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि अनुमति दिएको छ जिमेललाई उनीहरूको मनपर्ने ईमेल खाताको रूपमा फेला पार्‍यो। हुनसक्छ यो गर्नुहोस्, हामीसँग एन्ड्रोइडमा पहिले नै आउटलुक छ।
अनुकूलित र राम्रो डिजाइन
पहिलो को पहिले नै अनुप्रयोगले छिटो मेटाउने, अभिलेख राख्ने वा प्रोग्रामिंगको लागि स्वाइप इशाराहरू प्रस्ताव गर्दछ सबै ईमेलहरूको। हामीले गुगलको इनबक्समा फेला पारे जस्तै केही। यसको अर्को उत्कृष्ट गुण भनेको अनुप्रयोग भित्रै यसको आफ्नै पात्रोको निगाह पनि हो, जुन प्रयोगकर्ताले घटनाहरूको लागि अनुस्मारकहरू र सूचनाहरू पहुँच गर्न सक्दछ।
भुल्ने सुविधाहरू जस्तै फाईलहरू, इनबक्स फिल्टरहरू, द्रुत खोज संलग्न गर्नुहोस् र धेरै अन्य सुविधाहरू जुन प्रयोगकर्ताले आफ्नो ईमेल खाता प्रबन्ध गर्न सुरू गर्दा मुख्य प्रवाहमा केन्द्रित हुन्छन्, यो हॉटमेल, एमएसएन, जीमेल, याहू मेल, आईक्लाउड, माइक्रोसफ्ट एक्सचेन्ज र अफिस 365 XNUMX होस्।
यदि तपाईं आउटलुक प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने अब तपाईं आफैले घरमा यो आधिकारिक अनुप्रयोगको साथ पाउनुहुनेछ माइक्रोसफ्टले एन्ड्रोइडका लागि जारी गर्‍यो।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू » माइक्रोसफ्टले आफ्नो आउटलुक मेल अनुप्रयोग एन्ड्रोइडमा सुरू गर्दछ
तर यो अनुप्रयोग पहिले नै अवस्थित छ, हैन?
नवीनता के हो?
र यी सबै, यो अनुप्रयोगको नयाँ के हो, यदि यो पहिले नै अवस्थित छ? तिनीहरूले केवल इन्टरफेस संशोधन गरे !!!!
JOSS लाई जवाफ दिनुहोस्
ती दुई अनुप्रयोगहरू सुरु गरे केही चाहनको लागि छोडिदिए। पछिल्लो "आउटलुक" सायद सबै भन्दा राम्रो इन्टरफेस तर यो हराइरहेको चीजहरू थिए। यो नयाँ हो जुन हामीलाई आशा छ कि तिनीहरूले यसलाई सुधार गर्नेछन्।
तर यदि यो अनुप्रयोग गुगल प्लेमा वर्षौं भैरहेको छ, र माइक्रोस्ट, उही डिजाईन द्वारा प्रमाणित, म नवीनता देख्दिन।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट ले रूसमा एन्ड्रोइड .3.० एल पाइसकेको छ